အိတ်လန်းလန်းလေးတွေ အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Htet Aung Aung
အသစ်တွေ ရောက်ပြီလား? အိတ်တွေမရောင်းဘူးလား? မေးနေတဲ့ ချစ်ကာစတန်မာတွေအတွက် 🎒🎒🎒အိတ်လှလှ ကွာလတီအမြင့်တန်းလေးတွေ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ပဲရောင်းပေးလိုက်ပါပြီနော် 💼💼💼
🏋️‍♀🏋🥋 Gymn ဘဲဆော့ဆော့
Street fashion အိတ်လှလှလေးတွေနဲ့ ရှိုးထုတ်လို့ရပြီ 😊😊😊
Instock မို့ ဒီနေ့မှာ နက်ဖြန်လှလို့ရပြီ 👍👍👍
📭📭📭ဆက်သွယ်ဝယ်ယူလိုပါက Thura HeinAung cb ☎☎☎ 09400903934 or 09788808977 အမည်‌ ၊ ပို့ရမယ့် လိပ်စာအတိအကျနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ပြောပေးပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်
👉👉ရန်‌ကုန်‌ဖြစ်‌ပါက မြို့နယ်‌ အလိုက်‌ပို့ခ ‌ပေးရပါမယ်‌
👉👉နယ်‌ဖြစ်‌ပါက ကားဂိတ်‌ပို့ခ ၁ထောင် ‌ပေးရပါမယ်‌ ‌တန်‌ဆာခ ကို ဝယ်‌သူဘက်‌ကသာ‌ပေး‌ဆောင်‌ရမယ်‌👈👈
📣📣📣လိုအပ်‌တဲ့ချိန်‌ မှာချင်‌လျှင်‌ ‌အောက်‌က link မှာ like လုပ်‌ခြင်းဖြင့် အချိန်‌မ‌ရွေး မှာနိုင်‌ပြီး နှစ်သစ်လက်ဆောင်ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွေကိုလည်းခံစားနိုင်မှာပါ...https://www.facebook.com/yankihaa/